Dayactirka Xilliga Joogtada ah ee Kahortagga ayaa ka sii socdaa Gegada Diyaaradaha Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDayactirka kahortagga xilli xilliyeed ee kahortagga ayaa ka sii socdaa garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Dayactirka kahortagga xilli xilliyeed ee kahortagga ayaa ka sii socdaa garoonka diyaaradaha ee Istanbul
13 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Ka-hortagga ka-hortagga ah ee ka-hortagga ah ayaa ka sii socda madaarka Istanbul
Intii lagu guda jiray geeddi-socodka faafa ee 'Covid-19,' kaas oo saameeya adduunka oo dhan, Madaarka Istanbul wuxuu sii wadaa ka hortaggiisa iyo dayactirka qorsheysan 7/24.
Albaabka Turkiga ee dunida, iyo weliba sannadkiisii ​​ugu horreeyay ee caalamiga ah ee HUB Istanbul Airport, si ay ugu diyaargarowdo howlaha sharci-darrada ah ayaa sii socota hawlgal aan xasilloonayn. Kooxaha farsamada waxay sii wadaan dadaalkooda si ay u horumariyaan khibradaha safarka ee garoonka diyaaradaha Istanbul iyo inay bixiyaan adeeg "badbaado iyo nadaafadeed" ka dib Covid-19.
Gegada diyaaradaha ee Istanbul waxay qiimeyn ku sameeysaa nasashada khasabka ah ee sida ugu hufan ...
Kooxo farsamo, oo si firfircoon uga shaqeynayay garoonka diyaaradaha Istanbul ilaa maalintii ugu horreysay ee aafada Covid-19 ee adduunka ka bilowda, ayaa maddaarka garoonka ka dhigaya mid u diyaarsan rakaabka iyagoo og fursad u leh. Iyada oo la baarayo iyo kontaroolashooyinka daboolida dabaqa aagga rakaabka, ayaa nadiifinta iyo shaqeynta rinjiyeynta lagu sii wadaa saqafyada sare ee la hakiyey. Xilligan lagu jiro howlaha duulista, dayactirka meelaha qoyan, xakamaynta wajiga iyo saqafka saqafka, dayactirka alaabada guuritaanka iyo alaabada go'an ayaa sii socon doona xilliga qaboobaha soo socda.
Meelo cusub ayaa lagu daray raaxada rakaabka iyo shaqaalaha si loo kordhiyo khibrada safarka ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Meelo qoyan oo dheeri ah, garoomada ciyaarta ee carruurta, meelaha dadku ku yaalliin iyo xafiisyo ayaa la sameeyay, iyadoo loo diyaariyay aag loogu talagalay martida naafada ah. Qolalka cuntada loogu talagalay shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa dib loo cusbooneysiinayaa howsha waxaana loo baahan yahay qaban-qaabooyin loo sameeyo kala-guurka shaqaalaha ka dib Covid-19.
Dayactirka qorsheysan ee nidaamyada korontada ku shaqeeya ee garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa sii socda.
Waxaa loo arkaa mid ka mid ah yoolalka ugu waaweyn ee loo weeciyay garoonka diyaaradaha ee Istanbul inuu noqdo mid tusaale u noqon kara madaarka adduunka marka laga hadlayo qibradaha safarka ka dib faafitaanka adduunka, maadaama ay ku jirtay arimo badan illaa maalintii ugu horraysay. Dayactirka nidaamyada korantada elektiroonigga ah ee ujeeddadan waxaa loo fuliyaa iyada oo aan kala go ’lahayn. Xakameynta iyo dayactirka Transformers-yada, koronto dhaliyaha, aaladaha UPS, guddiyada korantada, qalabka korantada, kuwaas oo awood u leh inay kaafiyaan baahiyaha tamarta ee magaalooyinka dhexdhexaadka ah isla markaana quudiya 7/24 nidaamyo aan kala go 'lahayn, oo sii socda.
In kasta oo cabbiraadaha xilliyeed ee dhulka hoostiisa iyo nidaamyada ilaalinta hillaaca ee madaarka Istanbul ay sii socdaan, nidaamyada ogaanshaha xaaladaha degdegga ah ee ogaanshaha dabka, digniinta iyo musqulaha naafada ah, taleefannada gurmadka ee tunelada gawaarida iyo meelaha korantada / farsamada, tijaabinta iyo dayactirka nidaamyada raadiyeyaasha ayaa sidoo kale la fuliyaa. Waxa intaa u dheer oo dhan, tijaabooyinka marxalada dabka ee si guul leh looga sameeyey garoonka diyaaradaha oo dhan ayaa la soo celiyaa.
Ka-hortagga iyo ka-hortagga nidaamyada farsamada ayaa si joogto ah loo fuliyaa muddo xagaaga ah oo siman.
Dayactirka qorsheysan, xakameynta iyo bedelida waxyaabaha chillers-ka, bambooyinka wareegga, kuleyliyaha, makiinadaha, miirayaasha nidaamka, kala-soocidda hawada iyo fadhiga kiimikada iyo qeybaha kiimikada, qeybaha hawo hawleed ayaa sidoo kale ay wadaan kooxaha si loo hubiyo in si habsami leh ay u shaqeeyaan nidaamka kuleylka iyo qaboojinta garoonka diyaaradaha Istanbul.
Kooxahani waxay sii wadaan dayactirka waqti-yari ee nidaamyada duulimaadyada khaaska ah si joogto ah ...
In kasta oo loo diyaargaroobayo Wadada 3-aad, oo ku taal bariga Terminal Airport-ka Istanbul, ayaa socda, isku-dhafka rakaabka rakaabka, nidaamyada tamarta diyaaradaha ee 400Hz iyo nidaamyada hawo qaboojinta ee hawada ka horreeya iyo nidaamyada maraakiibta ee lagu rakibay nidaamka 3-aad ee Runway ayaa waxaa furi doona kooxaha. Intaas waxaa sii dheer, dayactirka kahortaga billaha ah waxaa si habsami leh loogu fuliyaa wiishashyada, wixiyeyaasha iyo ka-baxsadayaasha.
Waxqabadyada ka hortagga ah ee loo yaqaan'vidvid-19 'ayaa sidoo kale la sii wadaa…
Miiraha iyo nadiifinta labalabeynta, jeermis-dilidda ayaa lagu sameeyay dhammaan haamaha hawo-mareenka ee garoonka diyaaradaha qiyaastii Covid-19, waxaana la kordhiyey tirada nadiifinta iyo jeermis-diidka. Nidaam nadiifin iyo jeermis oo isku mid ah ayaa si isdaba joog ah uga socda dhammaan aagagga garoonka diyaaradaha gaar ahaan meelaha ay taabteen.
Aagagga ay ka mid yihiin Miisaska Jeega-baarista, Aagaga Baasaboorada Baasaboorka, Kooxaha Fadhiista, Elevators, Hoolka cuntada, ATM-yada, Dhammaan Aagagga Cuntada & Cabbitaanka, Dukaamaysiga, daraasadaha la xiriira ayaa loo sameeyaa si loo ilaaliyo fogaanta bulshada.
Qiimeynta howlaha dayactirka iyo dayactirka ee laga sameeyay garoonka diyaaradaha ee Istanbul, Kaaliyaha Maareeyaha Howlaha Farsamada ee howlaha Madaarka Fırat Emsen wuxuu yiri, “Waqtigan, oo hadda lagu tirinayo maalmo dib loogu soo celinayo gegada diyaaradaha ee Istanbul, waxaan sii wadeynaa shaqo qandho leh oo aan siineyno rakaabkeena 'khatar eber' garoonka diyaaradaha marka la eego amniga caafimaadka. . Adoo isku darsanaya habeenkeenna maalmaheenna iyo dhammaan unugyadayada la xiriira oo dhaha 'marka hore caafimaadka' waxaan ku fulineynaa howsha si sax ah oo qumman. Lugta ugu muhiimsan ee hawshani waa Adeegyada Farsamada iyo Hawlaha Dayactirka Muddada ah ee ka socda meel kasta garoonka diyaaradaha Istanbul. Intii lagu guda jiray geeddi-socodka faafa ee 'Covid-19,' kaas oo saameeya adduunka oo dhan, Maddaarka Istanbul wuxuu sii wadi doonaa ka hortaggiisa iyo dayactirka qorsheysan 7/24 wuxuuna siin doonaa rakaabkiisa khibrad safar oo gaar ah oo ah meeshii ay uga tagtay hannaanka caadiga ah. Wuxuu rumeysan yahay inaan ka gudbi doonno howshan adag, waxaana uu yiri 'waxaan sugeynaa maalinta aan la kulmi doonno rakaabkeena farxad'.
Maareynta Dayactirka iyo Dayactirka ee Malatya Loco waxay leedahay 4 jid oo waddo bakhaar xilliyeed ah…
Ku dhawaaqida qandaraaska: Taariiqda DMU 30000 ee loo qoondeeyay Adana Loco Maaraynta Kuxirnaanshaha Waxqabadka ...
Ogeysiiska Qandaraaska: Agaasime Waaxeed Kuxigeenka Dayactirka ee Adana Loko DM
Ogeysiinta Qandaraaska: Ankaray iyo Wareegyada Dhismaha Nidaamka Tareenka ee Magaalada, Stations ında
Ogeysiinta Ugaarsiga: Waxay ku yaalliin Warehouse Direct Directorkad Warehouse iyo Dhismaha Goob-hawleed cusub Müdür
Balzova Teleferik waxaa lagu soo geli doonaa dayactir marmar ah
TCDD TenderD Ogeysiiska: Qalabka loo badalayo 160 gaadhi-qaboojiyeyaal hawo hawo hawo leh…
Ogeysiiska qandaraaska: Qalabka farsamada iyo korantada ee xarunta Polatlı…
Ogeysiiska Iibsiga: Dayactirka Xilliga Hawada Sare ee Dekada (Dekeda…
Keçiören Cable Baabuur Dhigista Kormeerka Gawaarida Dayactirka iyo Dayactirka Gawaarida Gawaarida
Dayactir Wajib ah oo lagu dhammaystiray Balchova Ciyaaraha Gawaarida
Dayactirka Muddo Kordhinta Elevators-ka iyo Gudayaasha Kocaeli
Hawlgalka Garoonka IGA
Gegada Diyaaradaha Istanbul 3. runway
Terminalka Garoonka Diyaaradaha Istanbul
Ku Soo Dhaweynta Musharixiinta Dalbashada internship ee KARDEMİR!
Lacag Bixinta Waqtiga Dheeraadka ah waxaa lagu soo daray DHMI iyadoo 3 jeer la kordhiyay
Sida ku xusan sawirada lagu baahiyay warbaahinta bulshada bishii Juun 2, 2020, ciidamada qalabka sida ee turkiga ayaa mar kale gantaalka Atılgan u diray nidaamka difaaca hawada sare ee Idlib. Ku meelee DefenceTurk [More ...]
3 garoonka diyaaradaha Istanbul. Dhismaha Runway
OGEYSIIS KHATAR AH: OGEYSIISKA KIIWAANKA TCDD DIIWAANKA 3AAD DIIWAANGALINTA GUUD EEİ - - XUDUUDKA AKHİSAR…
Diyaarad ayaa la hadlay, waxay u muuqatay ... Maxaad u eegi doontaa Madaarka Istanbul?
3. Ka shaqeeya garoonka diyaaradaha, jiilaalka barafka jiilaalka